Duufaanta Florence oo ku dhufatay Maraykanka - Worldnews.com
Waxay sheegen inay filayeen daa'dad nolosha khalkhalgelinaya oo ka dhasha roobabka iyo dabeylaha sare u sii kacaya.
Xarunta qaran ee duufaannada Maraykanka ayaa sheegtay in
Duufaanta Florence oo ku wajahan gobollo ku yaalla Mareykanka
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray digniino is daba joog ah, isagoo shacabka u sheegay iney u diyaar garoobaan duufaanta Hurricane Florence, taasoo la...
Waxaad maqashay duufaanta Florence, waxay halis ku haysaa xeebaha bari ee dalka Mareykanka waxaana laga bixiyey digniino badan oo ku saabsan musiibo. Laakiin duufaanta...
Duufaanta Florence: Fatahaado xoog leh oo go'doomiyay magaalada Wilmington
Magaalo xeebeedka Wilmington ee gobolka North Carolina ayaa ka go'day gobolka intiisa kale, iyo guud ahaan Maraykanka, ka dib markii ay ku soo rogmadeen fatahaado ka...
BBC News 2018-09-17
Duufaanta Florence oo ku dhufatay Mareykanka
Duufaanta wadata roobab aad u culus ayaa soo gaaray dhulka xeebaha ah ee gobolka North Carolina iyo South Carolina ee dalka Maraykanka. Malaayiin qof ayaa ka qaxay...
"Halista nololeed ee ka dhalanaysa duufaanta Florence ayaa sare u sii kacaysa" sida uu ka digay barasaabka gobolka North Carolina, Roy Cooper. Isaga oo saxaafadda la hadlay...
Sawirada: duufaanta Hurricane Florence ee ku dhufatay Mareykanka
Duufaanta Hurricane ayaa jimcihii ka soo caga dhigatay waqooyiga Carolina waxa ayna ku dhufatay guud ahaan dhulka xeebaha ah ee ku yaalla bariga Mareykanka. Waxaa la soo...
Duufaanta Hurricane ayaa jimcihii ka soo caga dhigatay waqooyiga Carolina waxa ayna ku dhufatay guud ahaan dhulka xeebaha ah ee ku yaalla bariga Mareykanka. Waxaa la soo sheegayaa in duufaantan ay ku dhinteen 5 qof islamarkana kumannaan qof ay ku barakaceen oo ay ku nool yihiin hoy kumeelgaar ah. Waxaa digniino...
Khasaare ka dhashay duufaanta ku dhufatay Philippines
Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay duufaanta Manghkhut ee ku dhufutay dalka Philippines taaso khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba ka gaysatay jasiiradaha ku yaalla halkaasi . Duufaanta ayaa dhulka dhigtay khadadka isgaarsiinta Philippines waxayna hakad gelisay isu socodka gaadiidka. Duufaanta Manghukt ayaa ku sii siiqaysa deeganno ku yaalla koonfurt Shiinaha. Waxayna khatar...
Duufaanta Irma oo soo cagadhigatay Cuba
Duufaanta Irma oo xawaare sare ku socota ayaa soo gaartay dalka Cuba kaddib markii ay burbur lixaad leh ka soo gaysatay guud jasiiradaha Caribbean-ka. Xilligan la joogo duufaanta Irma oo wadata dabeylo culus iyo roob mahiigaan ah ayaa fara kulul ku haysa dalka Cuba, xilli ay duufaantu ka soo gudbayso waqooyiga jasiiraddaasi kaddib markii ay burbur ba'an ka soo gaysatay...
Duufaanta Maria oo ku jihaysatay Virgin Islands iyo Puerto Rico
Duufaanta Maria oo ah middii labaad ee ugu awood badnayd ee badda Atlantigga ka soo kacda xilligan ayaa ku sii wajahan jasiiradaha Virgin Islands iyo Puerto Rico. Duufaaantan oo cabirkeedu yahay heerka shanaad ee dabaylaha ayaa haddaba dhibaato u gaystay jasiiradda Caribbean-ka ku taalla ee Dominica. Si kooban ayay awoodeedu hoos ugu dhacday iyadoo heerka afraad gaadhay laakiin...
Duufaanta Florence oo Garaaceysa North Carolina
Dabeylo iyo roobab xoogan oo ka dhashay duufaanta loogu magac-daray Florence ayaa wali garaacaya qeybo ka mid ah gobollada North Carolina iyo South Carolina ee dalkan Mareykanka. ......